महिलालाई होच्याउने गीतको भिडिओ खेल्ने... :: सेतोपाटी संवाददाता :: Setopati
'के हो यस्तो गीत, घाँटीभन्दा तल.....एकदमै खत्तम शब्द। यसले तिम्रो केटीहरूप्रतिको धारणा देखाउँछ', उनले लेखेकी छन्।
'योभन्दा नराम्रो गीत सुनेको पनि थिइनँ, फेद न टुप्पोको गीत । घाँटीभन्दा तल त राम्री नै छे अरे'
'आजसम्म नदेखेको र नसुनेको तुच्छ मानसिकता भएको गीत लेखक। अचम्ममा छु रीमाले कसरी यस्तो गीत खेलिन?', शर्मिला गुरूङले रीमालाई प्रश्न सोधेकी छिन्।
'के भनेको होला त्यस्तो घाँटीभन्दा तल राम्री नै छे रे। फेरि छोरी मान्छेलाई नै नराम्रो बनाएको यो के तालको गीत निकालेको होला राम राम। के यो हिट हुने निन्जा टेक्निक हो? केटीको त घाँटीभन्दा तल' गायिका राउतले लेखेकी छन्, 'यो लेख्ने र गाउनेको त तलदेखिमाथि सम्म केही पनि गतिलो रहेनछ, सबैभन्दा खत्तम त सोच नै हो। सोच गतिलो भएको भए छोरीमान्छेलाई हेर्ने एङ्गल गतिलो भको भए यस्तो घटिया गीत हेर्न र सुन्न पर्थेन होला। यो खत्तम छ। केटीलाई यौनको साधन बनाउनेले नै यस्तो गीत निकाल्छ। यो गीत देखेर मलाई नेपाली संगीत कता जाँदैछ भनेर सारै चिन्ता लाग्यो..छि छि छि।'
प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन १५, २०७६, ११:३४:००